ကိုလူဩ: ဦးအေးမောင်၊ဗုဒ္ဓနဲ. ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ စာအုပ် အင်တာဗျူး
ဗုဒ္ဓနှင်. ဗုဒ္ဓဝါဒ စာအုပ် အင်တာဗျုး
ဆရာအောင်သင်းအမေး၊ ဆရာဦးအေးမောင် အဖြေ
သင်း။ ။ ကဲ- ဆရာရေ၊ ဒီတစ်ခါတော.ဖြင်. “ဗုဒ္ဓနှင်. ဗုဒ္ဓဝါဒ” စာအုပ်ကြောင်းကို လှည်.ပါရစေတော.။
အေး။ ။ မေးပါ ကိုအောင်သင်း မေးပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
သင်း။ ။ ပထမဆုံး မေးလိုက်ချင်တဲ. မေးခွန်းကတော. ဆရာဒီစာအုပ်ကို ဘာကြောင်.ရေးခဲ.သလဲ။ ဆိုလိုတာက ဆရာရယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်က တိုက်တွန်းလို. ရေးခဲ.တာလား၊ ကိုယ်.သဘောကိုယ်.ဆန္ဒ အရရေးခဲ.တာ ဆိုရင်လည်း ဘာကြောင်. ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာခဲ.သလဲဆိုတဲ.မေးခွန်းပါပဲ။
အေး။ ။ဒီဗုဒ္ဓနှင်.ဗုဒ္ဓဝါဒ စာအုပ်ကို ရေးဖို. ဘယ်သူကမှ မတိုက်တွန်းခဲ.ပါဘူး။ မတိုက်တွန်းတဲ. အပြင်တစ်ချို.ကဆိုရင် ဒီစာအုပ်ကို မရေးဖို.တောင်သတိပေးခဲ.ဖူးပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ. ကျွန်တော်ရေးခဲ.တယ်။ ရေးပြီးတော. စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဆီကို ဖတ်ပြီးထင်မြင်ချက်ပေးဖို. စာမူကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ တကတဲ ကိုအောင်သင်းရယ်၊ စာမူကို ပြန်မပေးတော.ပါဘူး။ ကျွန်တော်.ဆီမှာ မိတ္တူ ကျန်ရစ်ခဲ.သေးလို. ကံကောင်းတယ် ဆိုရမှာပေါ. ကိုအောင်သင်းရယ်။
သင်း။ ။ဘာဖြစ်လို.လဲ ပြန်မပေးတာလဲ အဲဒီစာရေးဆရာက ဒီစာအုပ်ကို မထုတ်စေချင်လို.များလား။
အေး။ ။မပြောတတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင်. ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပေါ.။
သင်း။ ။ အင်း- ဒီလိုဆိုတော. တိုက်တွန်းတဲ.သူ မရှိတဲ.အပြင် တားမြစ်တဲ. သူတွေတောင်ရှိခဲ.သေးတာကိုး။ ဒါကြောင်. ကျွန်တော်က ဘယ်လိုက ဘယ်လို ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာခဲ.သလဲ ဆိုတာကို မေးတာပါဆရာ။
အေး။ ။ရေးချင်စိတ်ပေါက်တာကတော. ကျောင်းသားဘဝကတည်းကပဲ ကိုအောင်သင်းရေ။ ဒီလို-ဒီလို၊ ကျွန်တော်က အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက စာလေးပေလေး ဖတ်တာကိုတော. ဝါသနာပါတယ်။ ဒီတော. နည်းနည်းပါးပါး စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ. အချိန်ကစပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ. လူအများစုရဲ. ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တစ်ချို.ကို တယ်ပြီးဘဝင်မကျခဲ.ချင်ဘူး။ ဒါနဲ.ပဲ ကောလိပ်ကို ရောက် လာတော. အင်္ဂလန်ပြည် ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းက ထုတ်ဝေတဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကို ရှာပြီးလေ.လာခဲ.ပါတယ်။အဲဒီမှာ တင် ဘာကိုသွားတွေ.သလဲဆိုတော. ကျွန်တော်တို. ရှေးမြန်မာဗုဒ္ဓစာပေမှာ မတွေ.ဖူးတဲ. ဗုဒ္ဓဒေသနာ တစ်ချို.ကိုလည်း သွားတွေ.တယ်။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာ. အသိပညာရှင်ကြီးတွေက ဗုဒ္ဓဝါဒကို ထောက်ခံပြီးရေးသား ထားတာတွေကို လည်း သွားပြီးတွေ.ပြန်တယ်။အဲဒီမှာတင် ဒီစာအုပ်ကို ရေးချင်စိတ် ပြင်းပြင်းပြပြ ဖြစ်လာမိတာပါဘဲ။ အဲ- ၁၉၆၂ ရောက်တော. ကျွန်တော်.ရည်မှန်းချက် ရုပ်လုံးပေါ်လာတော.တာပေါ.လေ။
သင်း။ ။နားလည်ပါပြီဆရာ။ ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကို မေးလိုက်တာက အသိပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို.၊ စာပေပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို. ဘယ်လိုအဓိဌာန်ပြုရတယ်။ ဘယ်လောက်ကြိုးပမ်းရတယ်ဆိုတာကို ကျောင်းသားလူငယ်တွေသတိ ပြုမိစေချင်လို. ဒီမေးခွန်းကို တမင်ထည်.ပြီးမေးတာပါဆရာ။ နောက်ထပ်ပြီးမေးလိုက်ချင်တာက ဆရာဟာတကယ်. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို.သိနေကြပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ. ဆရာ.လေ.လာမှုကို ကြည်.လိုက်တော. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ. စူးစမ်းလေ.လာနည်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အပြင်ကလှမ်းပြီးလေ.လာနေသလိုလို ထင်ရတယ်ဆိုပါရစေတော. ဆရာရယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတာ တကယ်ရှိခဲ.ဖူးလားလို. မစူးစမ်းရုံတမယ်ပဲ ရှိတော.လောက်အောင် လေ.လာထားတာကို တွေ.ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာလွန်သွားရင် လည်းခွင်.လွတ်ပေတော. ဆရာရေ။ ဘာကြောင်.ဒီလိုဖြစ်သွားရတာကို သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
အေး။ ။အင်း- ကိုအောင်သင်းရဲ. မေးခွန်းက အတော်လေးကို ရှည်ရှည်ဖြေရလိမ်.မယ်၊ ဒီတော. တစ်ခြားအပိုင်းတွေကို မဖြေမီ ပြောချင်တာက ကိုအောင်သင်းရဲ. မေးခွန်းထဲ မှာပါတဲ. “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်” ဆိုတဲ. ဝေါဟာရနဲ. ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်နားလည်သလောက် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရကို ဗုဒ္ဓဝါဒီ အများစုရဲ. အစဉ်အလာခံယူချက်မျိုးနဲ. မဟုတ်ပဲ ဗုဒ္ဓရဲ. အလိုနဲ.အညီ နားလည်ရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ဦးဟာ တစ်- ဗုဒ္ဓ အထူးပြုဟောကြားခဲ.တဲ.တရားတွေ (ဥပမာအားဖြင်. သစ္စာလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဆိုတာမျိုးတွေကို) စူးစမ်းလေ.လာခြင်း၊ နှစ်- ကျေကျေညက်ညက် နားလည်ခြင်းနဲ. သုံး- လိုက်နာကျင်.သုံးခြင်းဆိုတဲ. အင်္ဂါသုံးပါးနဲ. ပြည်.စုံရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ဆက်တည်း ပြောလိုက်ချင်တာက စူးစမ်းလေ.လာရမယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓက အတော်ကြီးကို လေးအနက်ထားပြီး ဟောကြားခဲ.တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ကိုအောင်သင်းရေ၊ ခဏရပ်ပြီးစဉ်းစားကြည်.လိုက်စမ်းပါ။ စူးစမ်းတယ်လို. ဆိုလိုက်ကတည်းကသိချင်လို.မဟုတ်လား။ သိပြီးသားကိစ္စကို ဘယ်သူကစူးစမ်းနေတော.မှာလဲ။ သိချင်လို.သာစူးစမ်းတာပဲ မဟုတ်လား။ သိချင်တယ်ဆိုကတည်းက သို.လော၊ သို.လောဖြစ်လို.မဟုတ်လား။ သို.လော သို.လောဆိုတာ ဟာ သံသယပဲ မဟုတ်လား ကိုအောင်သင်း။ မရယ်နဲ.လေ- ကိုအောင်သင်း၊ ကျွန်တော်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးလား။
သင်း။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ၊ ကျွန်တော်ရယ်တာက တစ်ဆင်.ပြီးတစ်ဆင်. ဆရာရဲ. ကောက်ချက်တွေ တက်တက်သွားတာကို သဘောကျလွန်းလို.ရယ်လိုက်တာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ သံသယပေါ.။ ကဲ - ဆက်ပါဦး ဆရာ။
အေး။ ။ စူးစမ်းတယ်ဆိုတာ သံသယစိတ်ကြောင်.ပေါ်လာတာချည်းပဲပေါ.။ သို.သော်လည်း နေရာတကာမှာ သံသယစိတ် လွန်ကဲနေပြန်ရင်လည်း အသိပညာတိုးပွားမှု မရှိနိုင်တော.ဘူး။ ဒါကြောင်. အသိပညာရှာတဲ. အခါမှာ သံသယစိတ် လွန်ကဲမှုနဲ. မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်မှုဆိုတဲ. အစွန်းနှစ်ခုကို ရှောင်ပြီး အလယ်လမ်းကို လိုက်ဖို.လို ပါတယ်။
ဒီတော. ကိုအောင်သင်းရဲ.မေးခွန်းကိုဆက်ပြီး ဖြေရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ.သမိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဟာထင်ရှားဧကန်ရှိခဲ.ပါရဲ.လားဆိုတဲ. သံသယမျိုးကျွန်တော်.မှာဘယ်သောအခါက မှမပေါ်ပေါက်ခဲ.ပါဘူး။ ဒါပေမဲ.ကိုအောင်သင်းရေ- ဗုဒ္ဓဝါဒကို ဟိုရှေးဦးလက်မွန် စပြီးလေ.လာခဲ.ကြတဲ. အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေမှာတော.ဖြင်. အဲဒီသံသယမျိုးဖြစ်ခဲ.ကြဖူးသေးတယ်နော်။ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည်. လိုက်ပြန်တော.လည်း အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ.ကြတာသိပ်တော.မထူးဆန်းလှဘူးကိုအောင်သင်းရဲ.။ ဒီတုန်းက သူတို.ဆီမှာ ပါဠိဘာသာလေ.လာမှုကမရှိသေးဘူး။ သက္ကတစာပေ လေ.လာမှုသာရှိသေးတာ။ ဒီတော. သက္ကတစာပေမှာ တွေ.ရတဲ. “မဟာယာန” ဗုဒ္ဓဝင်ကိုသာ သိခွင်.ရကြတာပေါ.။ သက္ကတစာပေမှာ ပါတယ်ဆိုတဲ. ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာကလည်း ဗုဒ္ဓရဲ. တန်ခိုးပြမှုတွေနဲ. ဖောင်းပွပြီး ဗုဒ္ဓကို စကြဝဠာအရှင် ထာဝရသခင်လိုဖြစ်အောင် တင်ပြထားလေတော. အနောက်တိုင်းဗုဒ္ဓသုတေသီတွေရဲ. စိတ်ထဲမှာ သို.လောသို.လော ဆိုတဲ. သံသယတွေ ပေါ်ခဲ.ရတာပေါ.။ အခုတော.ဖြင်.ဗုဒ္ဓအကြောင်းသုတေသနပြုမှုတွေက ခိုင်မာလာပြီဖြစ်တဲ. အတွက် ဒီလိုသံသယမျိုး ( အဲ- ဗုဒ္ဓဆိုတာ တကယ်ရှိဖူးလားဆိုတဲ. သံသယမျိုး) ရှိတဲ. အနောက်တိုင်းသုတေသီရယ်လို. မရှိတော.ပါဘူး။
ဒါပေမဲ. တစ်ခုတော.ရှိတယ်ကိုအောင်သင်းရေ- သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကဗုဒ္ဓကို သူတို.ရှုမြင်ပုံနဲ. ကျွန်တော်တို. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရှုမြင်ပုံမှာ မတူတဲ. ကွာဟချက်တစ်ခုတော. တွေ.ရတယ်။
သင်း။ ။ဆိုစမ်းပါဦးဆရာ။ ကျွန်တော်တို.က ဆရာ.ဆီက အဲဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေကြားချင်တာပါ။
အေး။ ။သူတို.ရဲ. ထင်မြင်ချက်ကို ကျွန်တော်ရဲ. စာအုပ်ထဲမှာလဲ အတော်လေး စုံစုံစေ.စေ. ရေးခဲ.ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောင်သင်းလည်းတွေ.မှာပေါ.။ ဒီလိုလေ- ဗုဒ္ဓရှိစဉ်အခါက `ဘဂဝါ` ဆိုတဲ. စကားကိုပဲ သုံးစွဲခဲ.ကြတယ်။ `ဗုဒ္ဓ` ဆိုတဲ.စကားလုံးဟာ ထိပ်တန်းပညာရှိသူတော်သူမြတ်တွေကိုသာ ညွန်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓခေတ်မတိုင်မီ ပွင်.ခဲ.တဲ. ဗုဒ္ဓအဆူဆူဆိုတာ ကတော. ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်က ရှိခဲ.ဖူးတဲ. ပညာရှိသူတော်စင်များကိုသာ ရည်ညွန်းချင်းဖြစ်တယ်လို. ဆိုကြတယ်။
ရှေးအစဉ်အလာ ဗုဒ္ဓစာပေနယ်ထဲကမထွက်လိုတဲ.၊ ဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ယောက်အနေနဲ. ဒီအဆိုကို လက်ခံဖို.မလွယ်ပေမဲ. ကမ္ဘာအသိပညာနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်နှံ.စပ်ချင်တဲ. လူတစ်ယောက်အဖို.တော. အတော်လေး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို.ကောင်းတဲ. အချက်ပဲလို.ကျွန်တော်ထင်မြင်မိတယ်။
ဆိုကြပါစို. ကိုအောင်သင်းရယ်၊ ဥပမာ- သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဟာ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို လေ.လာစူးစမ်းတယ်၊ နောက်တော.အဖြေကိုတွေ.ရှိသွားတယ်။ အဲဒီအဖြေတွေ.ရှိချက်ဟာ သူ.တစ်ယောက်တည်းရဲ. ဦးနှောက်ထဲက လုံးခနဲ ခဲခနဲ ထွက်လာတာမှ မဟုတ်ပဲ။ သူ.အရင်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ. တွေ.ရှိချက်တွေနဲ. တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင်. ဆက်သွယ်နေမှာပဲ မဟုတ်လား။
သင်း။ ။ ဟုတ်တာပေါ.ဆရာ ၊ အိုင်းစတိုင်းရဲ.တွေ.ရှိချက်ဟာ နျူတန်ရဲ. တွေ.ရှိချက်တွေနဲ. ဆက်စပ်ချင်ဆက်စပ်နေမှာပေါ.။
အေး။ ။အဲဒီလိုပဲ တစ်ခြား အသိပညာနယ်ပယ်၊ အတတ်ပညာနယ်ပယ်တွေမှာလည်း အသိပညာတိုးတက်မှုဟာတစ်ဆင်.ပြီးတစ်ဆင်. တက်ခဲ.ရတာဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒီလိုပဲ (ကိုအောင်သင်း လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။) ကမ္မဝါဒ၊ ဘဝသံသရာ၊ ဈာန်တရား၊ ဒုက္ခသစ္စာ အစရှိတဲ. အချို.သောဗုဒ္ဓတရားတွေဟာ ဗုဒ္ဓမပေါ်မှီကတည်းက ရှေးအိန္ဒိယပြည်မှာ ရှိခဲ.ပြီး တရားတွေကိုး။ ဒီလိုပါပဲ။ လောကမှာ ရှိရှိသမျှ သင်္ခါရဓမ္မတွေနဲ. တစ်ခြားဟာတွေအားလုံးဟာ အဟောင်းနဲ.အသစ်ဒွန်တွဲနေတာချည်းပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ အဲဒီလိုရှိခဲ.ပြီးသားဖြစ်တဲ. အယူဝါဒတွေနဲ. ထွေးရောယှက်တင် ဖြစ်နေတဲ. အတွက်ကြောင်. `ဗုဒ္ဓရဲ. ပညာဂုဏ်` ဟာတစ်ပြားသားမျှ နိမ်.ကျသွားတယ်လို. ကျွန်တော်ဖြင်. မထင်မဘူး။ ဗုဒ္ဓက ရှေးဆရာတွေရဲ. တရားတွေကို အကြွင်းမဲ. လက်ခံ ခဲ.တာမှ မဟုတ်ပဲ။ ရှေးဆရာတွေရဲ. ကမ္မဝါဒတွေဟာ ဗုဒ္ဓဒေသနာတွေမှာ သိသိသာသာ ကြီပြောင်းလဲသွားပုံကို ရှေ.ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ကိုအောင်သင်းကို ပြောခဲ.သေးသားပဲ မဟုတ်လား။
ဒီနေရာမှာ ပြောလိုက်ရဦးမယ် ကိုအောင်သင်းရေ။ ဗုဒ္ဒရဲ. ဂုဏ်တော်တစ်ပါး မှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ. `ပညာဂုဏ်` ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို. ခြေခြေမြစ်မြစ် လေးလေးနက်နက်နားလည်ဖို. လိုအပ်တယ်လို. ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။ ဗုဒ္ဓဒေသနာတွေအရ ပညာဟာ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မှာ အမြတ်ဆုံးတရား ဖြစ်တယ်။ အဓိပ္ပယ်အားဖြင်. အလွန်နက်နဲ ကျယ်ပြောပါတယ်။ သိသင်.သိအပ်တဲ. အမှန်တရားအားလုံးကို သိမြင်ခြင်း၊ သိမြင်တဲ. အတိုင်းကျင်.ကြံနေထိုင်ခြင်းထိအောင် အကျုံးဝင်နေတယ်ကိုအောင်သင်းရဲ.။ ဒီ `ပညာ` ကြောင်.လည်း ဗုဒ္ဓက `ငါဘုရားကို မြင်သောသူသည် ငါ.တရားကိုမြင်၏။ ငါ.တရားကို မြင်သောသူုသည် ငါဘုရားကို မြင်၏ ` လို.မိန်.ကြားခဲ.တယ် မဟုတ်လား ကိုအောင်သင်းရဲ.။
သင်း။ ။နားလည်ပါပြီဆရာ၊ ပညာဆိုတာဟာ အမှန်ကိုသိယုံသာလျင် မကအမှန်ကိုလိုက်နာကျင်.သုံးနိုင်တဲ. စိတ်ဓာတ်၊ ကျင်သုံးခြင်တဲ. စိတ်နှလုံးရှိပါမှ ပြည်.စုံတယ်လို. ဆိုရမှာပေါ.။ ဟုတ်တယ်ဆရာ၊ ကျွန်တော်တို.မြန်မာလူမျိုးတို.ရဲ. ခံယူချက်မှာပညာရှိဆိုတာဟာ သိနားလည်ရုံသာမဟုတ်ဘဲ အကျင်.ပါဖြူစင်တဲ. သဘောကိုဆောင်နေတယ်လို. ကျွန်တော် နားလည်မိပါတယ်။
အေး ။ ။ဗုဒ္ဓရဲ.စိတ်နှလုံး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ.မှု၊ စိတ်ဓာတ်မြင်.မြတ်မှု၊ သူတစ်ပါးကို ကြင်နာသနားတတ်မှု၊ အမှားကိုခွင်.လွတ်တတ်မှု စတဲ.ကြည်ညိုဖွယ်ရာစရိုက်လက္ခဏာတော်တွေဟာ သူ.ခေတ်ကလူတွေရဲ. စိတ်နှလုံးမှာ ထင်းထင်းကြီးဖြစ်အောင်ကိုပဲ စွဲပြီးကျန်ရစ်ခဲ.တယ်။ အဲဒါကြောင်. ဗုဒ္ဓနဲ. ခေတ်ပြိုင် သို.မဟုတ် သူ.အရင်မတိုင်မီက ပေါ်ပေါက်ခဲ.တဲ. အိန္ဒိယဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ. အမည်တွေဟာ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း ဗုဒ္ဓရဲ.အမည်ကတော. ဒီနေ.ထိအောင်ထင်ရှားကျန်ရစ်ခဲ.တာဖြစ်တယ်လို. အနောက်နိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာသုတေသီပညာရှင်တွေကမှတ်ချက်ချခဲ.ကြပါတယ်။ အဲဒီမှတ်ချက်ကို ကျွန်တော်ဖြင်.သံသယမရှိ လက်ခံမိပါတယ်။ ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. အနောက်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဟောခဲ.တဲ.တစ်ချို.တစ်ရားတွေကို နှစ်သက်လက်ခံခြင်း မပြုနိုင်တဲ. ပညာရှင်အချို.ကတောင် ဗုဒ္ဓရဲ. စိတ်ဓာတ်မြင်.မြတ်မှုကိုတော. တလေးတစား ဝန်ခံပြီးကြည်ညိုကြပါတယ်။
သင်း။ ။နောက်တစ်ခု မေးချင်တာက ဆရာကိုးကားလိုက်တဲ. ကျမ်းတွေထဲမှာ အနောက်နိုင်ငံက ကျမ်းတွေတော်တော်များများကြီးကို တွေ.ရပါတယ်။ဆရာက သူတို.ကို အတော်ပဲလေးလေးစားစား ကိုးကားထားတယ်လို. ထင်မိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအရည်အသွေးကြောင်. လေးစားပါသလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို မေးလိုက်ရတာက ကျွန်တော်.ဆီက စာပေသမားလူငယ်တွေ သတိပြုသင်.တဲ.အချက်တွေ ထွက်လာစေချင်လို. မေးလိုက်ရတာပါပဲဆရာ။
အေး။ ။ကိုအောင်သင်းရေ၊ အဲဒီလိုမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော. ကျွန်တော်က အတော်များများလေးကို ပြန်ပြီး ပြောရတော.မယ်။ ပထမအချက်က ဗုဒ္ဓတရားတွေကို တင်ပြရာမှာ အနောက်တိုင်းဗုဒ္ဓကျမ်းစာပေတွေကို ကျွန်တော် အများကြီးမကိုးကား ဘူး။ စာအုပ်ရဲ. နိဒါန်းမှာ ကျွန်တော် ရေးလိုက်တဲ. အတိုင်း ဆဌသင်္ဂါယနာတင် မြန်မာပြန်သုတ္တန်နဲ. ဝိနည်းပိဋကတ်ကိုသာ အများဆုံးကိုးကားပြီး ရေးသားခဲ.ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီကောက်နှုတ်ချက်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ နိကာယ်သုတ္တန်အမည်နဲ. တကွတိတိကျကျ ဖော်ပြထားခဲ.ပါတယ်။နောက်ပြီး အနောက်တိုင်း ဗုဒ္ဓကျမ်းပြုဆရာတွေ ဟာလည်းစင်စစ်အားဖြင်. အဲဒီ နိကာယ်ငါးကျမ်းကိုပဲ မှီငြမ်းပြုပြီး ရေးသားခဲ.ကြတာပါ ပဲ။
သူတို.စာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်မကိုးကားဘူး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုးကားခဲ.ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဗုဒ္ဓမပေါ်မှီက အိန္ဒိယပြည်ရဲ. အခြေအနေ၊အထူးသဖြင်. ဘာသာအယူဝါဒ၊ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်၊ လူနေမှုစနစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေကို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာစာပေမှာ မတွေ.ရဘူး။ ဒါပေမဲ. ကိုအောင်သင်းရယ် ဗုဒ္ဓဝါဒစာပေကို ရေး တော.မယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို ချန်ပစ်ခဲ.ဖို.လည်းမသင်.ဘူး မဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင်.ကိုးကားရတာပါ။ နောက်ပြီးကိုးကားရတဲ.အကြောင်း နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော. ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ. ကိုက်ညီနေတဲ. သူတို.ဆီက ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတွေရဲ. အရေးအသားမျိုးတွေကို တင်ပြချင်လို.ပါပဲ။သူတို.ရည်ညွန်းတဲ. စာအုပ်စာတမ်းတွေကို ကိုယ်က လက်လှမ်းမမီလေတော. သူတို. ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားတာတွေလောက်ကိုပဲ ကျွန်တော်က ကိုးကားနိုင်တာပေါ.လေ။ ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကို ရေးခဲ.တာမှာ အဲဒီနှစ်ချက်ကလွဲလို. အနောက်နိုင်ငံ ကျမ်းပြုဆရာက တစ်ခြား အထောက်အကူ ပြောပလောက်အောင် ဘာမှမရခဲ.ပါဘူး။ တစ်နည်းပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင် သူတို.ကို သိပ်အထင်ကြီး လောက်စရာ မတွေ.ရပါဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရဲ. အစဉ်အလာ ယုံကြည်ချက်နဲ.ဆန်.ကျင်နေတဲ. ကမ္မဝါဒ၊ ဘဝသံသရာ၊ ရဟန္တာဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဒေသနာတွေကို သူတို.စာအုပ်တွေထဲမှာ တစ်ခါမှ ကျွန်တော်မတွေ.ခဲ.မိဘူး။
သူတို.လေ.လာမှုမှာ ကြီးမှားတဲ. တစ်ခြားဟာကွက်ကြီးတစ်ခုကတော. ဗုဒ္ဓလက်ထက်ရဟန်းသံဃာအကြောင်းကို လျစ်လျုရှုထားခြင်းပါပဲ။ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ရဟန်းသံဃာရဲ. အခြေခံဖွဲ.စည်းပုံကို မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ. ဝိနည်း ပိဋကတ်ဟာသိပ် စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတယ် ကိုအောင်သင်းရဲ.။ ရဟန်းသံဃာတော်တို.ရဲ. ဒီမိုကရေစီကျင်.သုံးမှု၊ လွပ်လပ်ပြီး တစ်သွေးတစ်မိန်.ဆိုတာမျိုး မရှိမှု၊ ရဟန်းနဲ. လူတို.ရဲ.တရားနဲ. အညီ အချင်းချင်းဆက်ဆံမှု၊ ဗုဒ္ဓရဲ.အံ.မခန်း စိတ်ဓာတ်မြင်.မြတ်မှု စသည်အားဖြင်. မှတ်သားကြည်ညိုစရာတွေ တစ်ပုံကြီးပါလာတယ် ကိုအောင်သင်းရဲ.။
ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓက “ငါဘုရား၏ တရားကို ကြားနာရသော်လည်း အချို.ပုဂ္ဂိုလ်တို.သည် အကျွတ်တရား ရကြလိမ်.မည်မဟုတ်။ အချို.ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမူကား ငါဘုရား၏တရားကို မကြားနာရသော်လည်း အကျွတ်တရား ရကြလိမ်.မည်” လို. ဟောကြားထားတဲ. ဒေသနာကို ကျွန်တော်တို. မမေ.သင်.ဘူး။
အဲဒီဒေသနာထဲမှာ ဗုဒ္ဓမိန်.ကြားခဲ.တဲ.အတိုင်းပဲ ဗုဒ္ဓရဲ.ဒေသနာတွေကို မကြားနာဖူး၊ မလေ.လာဖူးပါဘဲနဲ.ကို မိမိတို.စိန္တာမယဥာဏ်စွမ်းနဲ. အမှန်တရားကို သိမြင်သွားခဲ.ကြတဲ. အနောက်နိုင်ငံသားတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ဥပမာ- ကိုအောင်သင်းရယ်၊ ဂျာမန်ဒဿနဆရာကြီး ‘ရှိုပင်ဟွာ’ ဆိုလို.ရှိရင် လူတွေကို တဏှာလောဘစိုးမိုးနေတဲ. အတွက်လူ.ဘုံကြီးဟာ ဒုက္ခဘုံကြီးဖြစ်နေပုံကို အထောက်အထားများစွာနဲ. အလေးအနက် တင်ပြခဲ.ပြီးတဲ.နောက်မှာ ကမ္ဘာကျော် အသိပညာ ရှင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ. တာပဲ ကိုအောင်သင်းရဲ.။ သူ.တင်ပြချက်တွေ ကလည်း ကျွန်တော်တို. ရှေးရိုးအစဉ်အလာ ခံယူချက်တွေနဲ. မတူဘူး။ တကယ်လေးနက်ပြီး သေသေချာချာ စဉ်းစားကြဖို. ကောင်းတဲ. အချက်တွေမို.. သူတို.လိုအနောက် တိုင်းအသိပညာ ရှင်တွေကို ကျွန်တော်.စာအုပ်တွေထဲမှာ တတ်နိုင်သမျှ ကိုးကားထည်.သွင်းခဲ.ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်း။ ။ နားလည်ပါပြီ ဆရာ။တကယ်ဆိုတော. ဆရာက ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ. ပတ်သက်လာ ရင် ကျွန်တော်တို.ဆီက တကယ်. ပညာကျော် ဆရာတော်ကြီးများ ကြပ်မပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ.တဲ. သံင်္ဂါယနာတင် ပါဋကတ်မြန်မာပြန်ကိုသာ လေးထားပြီး ပြုစုခဲ.တယ်။ ပြီးတော.မှ စာဖတ်သူတွေအဖို. အပြန်.ကျယ်စွာ စဉ်းစားနိုင်အောင်သာလျှင် ကမ္ဘာ.အသိပညာရှင်တွေရဲ. အဆိုအမိန်.တွေ၊ သုတေသနပြုချက်တွေ၊ ထင်မြင်ချက်တွေ ကိုထည်.သွင်းခဲ.တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါပြီ။ နောက်ပြီး ဆရာက ဗုဒ္ဓဝါဒကို တကယ်တမ်းလေ.လာတော.မည်ဆိုရင် ပိဋကတ်မြန်မာပြန်ကို သေချာလေ.လာသင်.ကြောင်း သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ ဆရာ။
ကဲ-ဆရာရေ၊ ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီး မေးချင်တာတွေကတော. အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ. မမေးချင်တော.တဲ. အကြောင်းတွေကလည်း အများကြီးပဲ။
အေး။ ။ဟုတ်ပါ.- ကိုအောင်သင်းရေ၊ ကိုအောင်သင်း မေးလာရင်တောင် မှ ကျွန်တော်ကလည်း မဖြေချင်တဲ. အကြောင်းတွေက အများကြီးပဲ။
သင်း။ ။ဒီတော. အခွင်.သာရင်တော. ကျွန်တော လာခဲ.ပါရစေဦး၊ ဆရာ. ကိုသာကျန်းကျန်းမာမာ အသက်ရှည်ပါစေလို. ဆုတောင်းခဲ.ပါတယ်။
အေး။ ။ကဲ-ကို အောင်သင်း ပေးတဲ. ဆုအတိုင်း အပြည်.ပြီး စောင်.နေပါရစေဗျား။
Posted by ကိုလူဩ at 8:02 AM
ကိုပေါ February 10, 2009 at 5:25 PM
ကိုငြိမ်းချမ်း…….နည်းနည်းချင်းလာဖတ်ပါမယ်။ ပို့စ်တွေက ကျနော့်ကွန်ပြူတာက ကြည့်ရင် လေးထောင်တုံးတွေ ပေါ်နေလို့ ကော်ပီလုပ်ပြီး MS Word ထဲမှာ ပေ့စ် လုပ်ပြီး ဖတ်ရတယ်။ ဇော်ဂျီဖွန့်ဗားရှင်းမတူတာလားကြောင့်မသိ။
ဟုတ်လား ။ ကျနော်လည်း နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ. ဇော်ဂျီဖောင်. ၂၀၀၈ နဲ. ရိုက်ထားမိတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ အခုလိုလာဖတ်ပေးတဲ. အတွက် ။
ဒီစာအုပ်က ကျနော် ပြောလို.ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကို ကောင်းတဲ.စာအုပ်ပါ။ ကိုပေါ အတွက်လည်း ရေးစရာ ကုန်ကြမ်း အဖြစ်ရနိုင်ပါတယ်။
mm thinker April 26, 2009 at 8:34 AM
ရိုက်လို့ စုံလာရင် အီးဘုတ်ခ် လုပ်သင့်ပါတယ်။